Degso Emsisoft Anti-Malware loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (252.60 MB)
Degso Emsisoft Anti-Malware,
Emsisoft Anti-Malware waa barnaamij si wax ku ool ah kaaga ilaalin kara barnaamijyada xun. Cusbooneysiinta joogtada ah ee keydka macluumaadka waxay ka dhigan tahay inay aqoonsan karto furin cusub sida ugu dhaqsaha badan. Thanks to Emsisoft Anti-Malware, oo baareysa dhamaan codsiyada ka shaqeeya asalka sida softiweerka antivirus isla markaana lagu ogaado softiweerka xun, waad ka hortagi kartaa softiweerka xun inta uusan firfircooneyn.
Emsisoft Anti-Malware wuxuu ogaadaa software waxyeeleya kumbuyuutarkaaga isla markaana karantiil isla markaaba. Markaa waad tirtiri kartaa barnaamijka karantiilka ah sida aad rabto. Xiriir internet ayaa loo baahan yahay si sax ah loo dhiso.
Tilmaamaha Emsisoft Anti-Malware:
Waxay ka saartaa kombiyuutarka kombiyuutarka xumaanta sida Trojan, dixirig, keylogger, dialer iyo spyware.
Waxay bixisaa laba difaac oo waqtiga-dhabta ah ah, iskaanka saxiixa iyo ilaalinta malware-IDS (HIPS).
Emsisoft Anti-Malware wuxuu si joogto ah ugu shaqeeyaa inuu ilaaliyo nidaamkaaga. Waxay aqoonsaneysaa barnaamijka cusub ee xun ee xun ee internetka oo ay ugu wacan tahay is-cusbooneysiinteeda isla markaana ka hortageysa inay ku dhacdo nidaamkaaga.
Barnaamijka, waxaad ku sameyn kartaa baaritaanno xasaasi ah oo karantiil wixii fure aad aragto ka hortagna inaad ku dhex mushaaxdo nidaamkaaga.
Emsisoft Anti-Malware, waxaad si badbaado leh uga nadiifin kartaa kombiyuutarkaaga barnaamijyada waxyeellada leh ee aan loo baahnayn.
Emsisoft Anti-Malware Noocyada
Cabirka Faylka: 252.60 MB